'अब जनताले सत्तासीनका शब्दजालमा भ्रमित हुनु नपरोस्' | नेपाली पब्लिक 'अब जनताले सत्तासीनका शब्दजालमा भ्रमित हुनु नपरोस्' | नेपाली पब्लिक
होमपेज / ब्लग | विचार |
‘अब जनताले सत्तासीनका शब्दजालमा भ्रमित हुनु नपरोस्’
नेपाली पब्लिक २०७६, ३ बैशाख मंगलवार ११:१७
सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा विसं २०७६ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ! कमसेकम राजनीतिक पार्टीका सबै ‘छोटे-बडे’ नेताका शब्दजालमा यो वर्ष जनता भ्रमित हुनु नपरोस्। यो वर्ष वर्तमान नेपालका सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेपाली जनतालाई समृद्धिको शब्दजालमा रुमले, उनका अन्य उखान-टुक्काहरूका शब्दजालको त व्याख्या गरिसाध्य छैन। कुनै दिन, कुनै चाटुकार महाकविले महाकाव्य नै नलेख्ला भन्न सकिन्न, भाषण कला र शब्द चयनमा चतुर प्रधानमन्त्री दीर्घायु रहून्।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल के समृद्ध थिएन? कुन काल र कुन शासनको के मापदण्डलाई प्रमाण मान्ने? लिच्छवि र मल्ल्कालका प्रमाण त हाम्रासामु प्रत्यक्ष नै छन्। हाम्रा पूर्खाले बनाएर राखिदिएका मठमन्दिर, पाटीपौवासम्म हामीले थिचोमिचो गरेर बेचबिखन गरेर मासेर खाइसकेका छौँ। लाज, सरम र पापको सम्म डर छैन। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका पुरातात्त्विक सम्पदा, पुनःनिर्माण गर्नसम्म सकिएको छैन।
गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका बाइसे र चौबिसे राजा आफैँमा समृद्ध थिएनन् भन्न मिल्दैन। सेन राजाले दाइजोमा नौलखा हार र एकदन्ते हात्ती दिएनन् भनेर पृथ्वीनारायण शाह बाँउठेकै हुन्। पाल्पाली राजा, लिम्बुवानका सुब्बा, पश्चिम डोटी, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला पनि कम समृद्ध थिएनन्। उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर र कान्तिपुरको त कुरै नगरौँ, कति समृद्धि कति ! तामाङ राज्य, तेमाल, नुवाकोट पनि कम थिएनन्। जताततै समयानुकूल समृद्धि थियो।
नेपालले भोट अर्थात् तिब्बतसँग त लडाइँ गरेर जितेकै हो। चीनसँग नेपालको तिब्बतकै माध्यमबाट दौत्य सम्बन्ध कायम थियो। तर, राजदरबारका विशेष गरेर रानीहरू, भारदार तथा काजीहरूको आपसी कलहले तिब्बतको युद्ध जितेर नेपाली व्यापारीको धन र इज्जत दुवै स्थापित गर्ने र नेपालको एकीकरणमा चासो र चातुर्य देखाउने बहादुर शाहको बडो निर्ममतापूर्वक दमन गरियो। दमनको शृङ्खला भीमसेन थापादेखि हुँदै राजा वीरेन्द्रको वंश नाशसम्म आएर टुंगिनुपर्ने हो तर हिंसाका झिल्का देखिँदैछन्। सुगौली सन्धिअघि पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा, दक्षिणमा गंगा र उत्तरमा सतलज नदीका सीमा गोर्खालीहरूले लगाएका हुन्। शक्तिशाली र चतुर ब्रिटेनसँग उनीहरूको केही लागेन। सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भए। यस्तै छ अतीत।
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकले भाग लिए। हाम्रा लोकगीतमा यसका बान्की मिल्छन्। आफ्नी सोल्टिनीलाई गोर्खा सिपाहीका मुखबाट कविले गाएका छन्, ‘खुकुरी भिरेर सोल्टी, जानु पर्‍यो जर्मनको धावैमा।’ खुकुरी भनेपछि जर्मन नेता हिटलर पनि डराउँथ्यो भन्ने किंवदन्ती प्रचलित नै छ।
राजनीतिक शासनका हिसाबले जंगबहादुर राणाका हातमा सत्ता आएपछि भने राजनीति अलि स्थिर रह्यो। ससाना षडयन्त्र राणकालमा नभएका होइनन् तर निर्ममतापूर्वक दबाइयो। राजाहरू खोपीका देउता भए। राणाहरू शासक। त्यसबेला नेपालको आम्दानीको स्रोत भनेको जंगल र जवान मात्र थिए। तैपनि नेपाल भने समृद्ध नै थियो। तर, त्यो समृद्धि केन्द्रीकृत रह्यो। राणा धनी र जनता गरिब। युरोपको भ्रमणमा जंगबहादुर र पछि चन्द्र शमशेरले पनि समृद्ध भएकै रवाफ देखाए। राणाहरूले बनाएका भवनमा वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका मन्त्रालय छन्।
नेपाली जनताको घरदैलोसम्म समृद्धि पुर्‍याउन, देशको सबै अंगको अर्थात् सर्वाङ्गीण विकास गर्नुपर्दछ। सर्वाङ्गीण विकासको सरल परिभाषा गर्दा देशको सबै क्षेत्रको विकास हुनु हो। यातायातमा पानीजहाज र रेलका कुरा छाडिदिने हो भने पनि सडक त विस्तार हुनैपर्‍यो। सडक निर्माणका कथाभन्दा व्यथा धेरै छन्। काठमाडौँको हालत यस्तो छ, पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटीमा निर्लज्ज पाराले मोटरसाइकल दौडाउँछन्। ठेक्का लिएका काम पूरा हुँदैनन्। सिन्डिकेट यथावत् छ। रोडमा गाडी दुर्घटना भएर मानिसको मृत्यु नभएको दिनै हुँदैन।
अर्को, राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग स्वास्थ्य क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रको के कुरा गर्ने? विश्वास नगरी नहुने, गरेर पनि पार नलाग्ने। बल्लतल्ल मागमुङ गरेर ल्याएर पूर्वाधार बनायो। त्यसमा पनि कति कमिसन र ठगी भएर छतै खस्ने र वर्षायाममा पानी चुहिने समस्या आइपर्छन्। पत्रपत्रिकामा समाचार आउँछन्, चित्रसहितका समाचारका चर्चा हुन्छन् अनि सामसुम। हामी कृषिप्रधान देश भनेर थाक्दैनौँ। माटो किनेर ल्याएर बालुवामाथि बिच्छ्याएर कृषि पैदावर उत्पादन गर्ने इजरायलमा हामी जान्छौँ। हेर्छाैँ, घुम्छौँ र आउँछौँ। हाम्रामा न त सिँचाइको बन्दोवस्त, न पर्याप्त मल, न वातावरण ! अब त कृषियोग्य जमिन पनि सकिने अवस्था छ। समृद्धिका लागि देशका सबै अंगको विकास अनिवार्य छ।